Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment साताको पहिलो दिन सुनचाँदीकै मूल्य बढ्यो, कारोबार कतिमा ? - Pnpkhabar.com
साताको पहिलो दिन सुनचाँदीकै मूल्य बढ्यो, कारोबार कतिमा ?
काठमाडौं, १८ माघ : आइतबार सुनको मूल्य सामान्य वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार तोलामा ९२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आइतबार तोलामा ९२ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भएको हो ।
यस्तै तेजावी सुन तोलामा ९१ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यसैगरी चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । शुक्रबार तोलामा १२८५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आइतबार बढेर तोलामा १३२० रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ ।
घुस लिन अस्वीकार गर्ने १८ ट्राफिक प्रहरी सम्मानित
प्रधानमन्त्री ओली औद्योगिक पार्क शिलान्यास गर्न झापामा
आज नेप्से ८० अङ्कले घटेर २५ सय विन्दुभन्दा तल